Olole lagu joojinayo xaalufinta deegaanka & gubista dhuxusha oo ka socda dhul daaqsinka gobollada Sool & Sanaag. – Radio Daljir
Nofeembar 30, 2010 12:00 b 0
Buuhoodle, Nov 30 – Mudooyinkii u danbeeyey waxaa deeganda soolasha u dhexeeya Gobolada Sool Iyo Sanaag laga wadey Olole ka dhan ah Xaalufinta deegaanka, Iyadoo deegaanadaasi laga Mamnuucay Gubista Dhuxusha oo deeganadaasi aad ugu badnaa.
Deegaanadda Arimahaasi laga hirgeliyey waxaa kamid ah Awrboogays, Sarmaanyo, Xudun, Fiqifuliye, Iyo Damalaxagarre; Deegnadaasi ayaa dhamaantood dadka deegaankaasi waxay ka sameeyeen hawl galadaasi lagula dagaalamayo dhuxusha, Arimahaasi ayaa waxaa isu xilqaamay dadka deegaanka Iyagoo iska dhexdoortay Gudi loogu Magacdaray Gudiga dhuxul joojinta.
Arimahaasi ayaa waxaa ay markii hore ku bilowdeen Wacyi gelin loo sameeyey dadka deegaanka, Iyagoo markii danbe isu bedeley in gudiga arintaasi loo xilsaaray ay sameeyaan Hawl galo ay u isticmaaleen xoog, armahaasi ayaa intoodii badnayd lagu guulaystey sida ay sheegeen dadka deegaanku waxaana la gubey godad badan oo dhuxusha lagu keydin jirey, Iyagoo intaa ku daray in waxyaabo yaryar oo hada harsan ay kusoo afmeeridoonaan mudo kooban.
Hadaba maanta waxaa shir ku qabtay deegaanka Awqrboogays Xubanaha uu ka kooban yahay gudiga dhuxul joojinta ee ka dhisan deeganadaasi ayaa waxay kaga hadleen geedi socodka dhuxul joojinta deeanadaasi, hadaba shirkaasi markii uu dhamaaday ayaa waxaa Idaacada Daljir Studio-yaha ay ku leedahay Magaalada Buuhoodle xidhiidh lasoo sameeyey Masuuliyiinta Gudigaasi Kuwaasi oo ka xog waramay halka ay hada marayaan arimaha loo aasaasay Gudigaasi.
Cabdilaahi Nuur Maxameed Gudoomiyaha Gudiga wacyigelinta Deegnadaasi, Cabdilaahi Maxamed Ismaaciil Xidig, oo ah afhayeenka Gudigaasi, Iyo Xuseen Xasan ( Xuseen Jiriid) oo isaguna ah xubin kamid ah gudigaasi ayaa Idaacada Daljir u sheegay inay hawlhaasi socdaan.
Dhanka kale Guddigu waxay ka xog warameen cida gacan ka geysatey arimahaasi Waxana dhamaantood sheegeen inaysan Jirin Cid si rasmi ah arimahan gacan uga geysatey, marka laga reebo shaqsiyaad qurbajoog ah oo ay si gaar ah ula xiriireen, Iyagoo Intaa ku daray in hawlahan kharashaadka ku baxay ay ka aruuriyeen dadka deegaanka oo u badan dad reer Guuuraa ah.
Gabagabadii Guddiga ayaa dhamaan jaahliyada Deegandaasi Iyo Maamulka Puntland oo deegnadaasi Hoosyimaadaanba waxay ugu baaqeen in ay gacan ka geystaan Ka hortaga dhuxusha oo ah shay horseedi kara nabaad guur ku yimaada Deegaanka.